Amathiphu omama omncane ukunakekela izinsana
Udokotela uhlolisise umntwana osanda kuzalwa futhi wanikeza, ngokubheka kuqala, umsebenzi oyisisekelo: tshela, hlambulula umuthi noma uphonsa indlebe. Futhi uyazi ukuthi ungakwenza kanjani kahle? Ukuze umama angakhathazeki, sizokubonisa indlela yokwenza izinyathelo ezingasetshenziswa futhi ezidingekile ezinganeni. Sinikeza iseluleko esihle kumama omncane ukunakekela ingane esanda kuzalwa.
Ngifika kanjani ukuhlanza u-spout kusuka kumshubhu usana olusanda kuzalwa? Ukwabiwa okukhulu kufanele "kuhlanzwa". Ukuze wenze lokhu, sebenzisa amanzi amanzi abilisiwe noma isisombululo saline. Beka i-crumb ngemuva, hlela kancane ikhanda linye. I-Pipetochkoy ibamba 1-2 amaconsi esisombululo endaweni eyodwa. Vula ikhanda ngakolunye uhlangothi bese uphinda ukuxhaphaza ngevesi lesibili lomlomo. Ukunciphisa ama-allotments kufanele kususwe. Ngalesi sizathu kungcono ukusebenzisa i-vacuum aspirator ekhethekile. Kubonakala sengathi i-syringe, kodwa ithiphu layo libanzi futhi ivala ukungena kwesikhumba. Cindezela ipayipi le-aspirator, faka ngokucophelela leli phuzu emgqeni ongasese. Ngesandla sesibili, cindezela isigamu samahhala sosizi. Vumela uhambe. Uzozwa umsindo wesici. Hlanza i-aspirator bese uphinda konke ngenye ingxenye yengane. Izingane ezisanda kuzalwa cishe ngeke zithande okwenzayo. Ungesabi uma ingane encane iqala ukuphenduka nokukhala. Kubantwana kuze kube unyaka, akufanele neze usebenzise imishini yokupopayi (spyys) kuphela (ungafaka izixazululo zelinesi kuphela).
Ukuze ukomise umcoka ongasese wengane bese ususa ukuvuvukala, odokotela batusa ukusebenzisa amaconsi e-vasoconstrictive. Awuphili amakhaza, kodwa anciphisa ukuphefumula komzimba, ukukhulula umthwalo kusuka ezindlebeni. Mngcwaba umuthi emva kokuwuhlanza kwe-mucus, ngaphandle kwalokho umuthi ngeke ufinyelele i-membrane. Hlola ngokucophelela ibhodlela. Ngokuvamile, i-pipette yakhiwe ngqo esihlalweni se-vial. Ngaphambi kokuba unqume ikhala lomntwana, qalisa: shayela ikhambi bese ucindezela ithiphu le-raba. Linganisa ukuthi mangaki amaconsi akhululwa uma ecindezelwe, kungakhathaliseki ukuthi ubona izinga lemithi. Lokhu kubalulekile, ngoba ingane encane idinga ukuvuza nje ama-1-2 amaconsi engxenyeni ngayinye yekhala. Beka umntwana ngemuva, uphumule. Bamba ikhanda lakhe. Kungcono uma bakusiza. Ukudwengula okujulile akudingekile. Shayela ngayinye ngayinye ngesikhathi esisodwa. Amaconsi ama-Vasodilating namasongo kufanele asetshenziswe ngokuqapha. Ukusetshenziswa kwamaconsi hhayi eminyakeni, okungukuthi, ekugxilweni okukhulu, okwedlula umthamo noma ukugxilisa ngokuphindaphindiwe kungabangela ubuthi. Uma uthenga umkhiqizo, qiniseka ukuthi ucacise ukuthi yisiphi isigaba seminyaka esihlosiwe.
Hlanganisa iso lakho
Iningi le-otitis liphathwa ngokusetshenziswa kwamaconsi athile. Bheka ikhadi lomntwana - udokotela akumele akhombise igama lomuthi kuphela, kodwa futhi nenombolo edingekayo yamaconsi endlebeni ngayinye, kanye nemvamisa yokuphatha. Ngaphambi kokugxilwa kwe-instillation isixazululo sidinga ukushisa ekushiseni komzimba. Kubonakala sengathi akubanda, ukushisa kwegumbi lokushisa okwenziwe elangeni kubangela ukuzwa okungajabulisi kakhulu. Bamba ibhodlela ngaphansi komfudlana wamanzi ashisayo, bese uwela phezu kwesikhumba sendawo yangaphakathi ye-forearm. Uma uhla lwezinga lokushisa elungile, awuzizwa kubantwana abasha. Beka usana olusha ngeso eligulayo. Ezinganeni zakudala, umsele wendlebe uqondile futhi akudingeki ukuba udonsele i-auricle: ngale ndlela uzoletha kuphela ubuhlungu ku-crumb. Mane nje ufeze ibhodlela nge-pipette phansi bese ushaya inani elidingekayo lesisombululo. Kunconywa ukuthi ingane ilale kancane kule ndawo. Vala umcengezi wangaphandle wezindlebe ngebhola elincane loboya bekotini. Cishe wonke amaconsi ahlukaniswe abe angasetshenziselwa ukulula noma i-catarrhal otitis, nalabo abavunyelwe nge-eardrum ephukile (i-perulated purulent otitis). Qaphela!
Udokotela wanikeza umuthi wengane: tshela, umuthi we-antipyretic noma wokukhwehlela. Yini ongayikhetha ekhemisi: amaphilisi noma isiraphu? Uma i-crumb yakho ingakabi neminyaka engu-3 ubudala, yenza okuthandayo kwisiraphu: ilula kakhulu futhi imiswe ngokunembile, ngaphandle kwalokho kulula ukunikeza ingane encane. Qaphela umthamo wezokwelapha oboniswe udokotela, ucacise ukuthi uzosebenzisa nini ikhambi: ngaphambi noma emva kokudla? Linganisa inani elidingekayo lemithi (i-syringe dispenser noma i-spoon yokulinganisa) futhi ngobumnene, ungethuli ngokushesha umuthi emlonyeni. Mema umntwana ukuba aphuze. Ezinye izidakamizwa zikhishwa ngesimo se-suppository yama-rectal. Ngokuvamile, lawa ma-antipyretic agents asebenza kahle kakhulu kuleli fomu. Ikhandlela lifaka ngobumnene i-anus lemvuthuluka ekugcineni, ukuze liphele ngokuphelele emgodini.
Kungani umntwana ekhala ngemva kokubeletha?
Imisipha yokugaya ingane kuze kufike ezinyangeni ezingu-6
Ukulala okungenasiphelo kwengane
Jabulela futhi ukhethe: noma yikuphi i-whim - kuqoqo lezinsuku ezilandelayo
Ukubonakaliswa kwemithi yokwelapha kanye nezindlela zanamuhla zokwelapha
Indlela yokukhetha lover olungile
Amabhisikidi ngaphandle kwamaqanda
Inyama roll nge garlic kanye nezinongo
Ukudla ngokweqile kuwumkhuba wokhathazeka obulala ingqondo
Kuyini uthando nokuthi ungayithola kanjani
I-Cocktail "IJanuwari Enamandla"